> Resource > FCP > FCP in DVD: Sida loo Guba Final Cut Pro Movies in DVD
FCP waa software tafatir ah profesional aan toosan u isticmaala Mac. Haddii aad inta badan isticmaasho FCP si ay u abuuraan filimada, waxaa laga yaabaa in aad ka heli farabadan of .fcp ama faylasha .fcpx. Ma doonaysaa inay u dhoofiyaan aad Final Cut Pro movie in DVD? Qalab A DVD gubanaya loo baahan yahay tan iyo FCP ma ogola in aad si toos ah gubi DVD. Maqaalkani waxa uu ku tusi doona sida ay gubaan Final Cut Pro video inay DVD la Wondershare DVD Creator for Mac , software ah DVD abuurka sare ku shaqeeya kuu oggolaanaysa in aad ku gubi DVD cajalladaha tayo sare leh oo bedeley cad ah.
Wondershare DVD Creator for Mac Waa qalab ku haboon si ay u gubaan Pro Goo Final si DVD fudayd. Waxaad kaliya dajiyaan karaa videos (BTW, sawiro sidoo kale Muqaal la heli karo), qoraa DVD menu ka template, iyo ugu dambayntiina gubi filimada in disc DVD in lagu ciyaari karo ciyaaryahan kasta DVD guriga. Oo tallaabo tallabo ah, tutorial taas ku tusi doona sida ay gubaan FCP in DVD ee Mac OS X (Snow Leopard iyo Libaaxa oo ay taageerayaan). Haddii aadan leeyihiin Mac ah, aad u hesho Windows ka DVD Creator iyo gubi FCP-dhoofiyo MOV video inay DVD ee Windows.
Talaabooyinka Easy in ay Guba Final Cut Pro si DVD
Talaabada 1: Dhoofinta video in MOV la Final Cut Pro
Marka aad xaalkaa aad video la Final Cut Pro, waxaa dhoofiyo MOV ama faylasha Mpg by "File> dhoofinta> QuickTime Movie". Haddii ay file .fcp ah, marka hore la furo ka "File> Open" iyo dhoofinta sidii hore loo soo tilmaamay.
Talaabada 2: FCP Import video files
Ka dib markii aad ka heli files MOV si guul leh. Orod FCP si DVD gubi ka dibna waxay doortaa in la abuuro mashruuc cusub inay galaan suuqa kala barnaamijka. Si aad ku dari video ama sawir files, si toos ah jiidi videos ama sawiro barnaamijka, ama guji "+" badhanka si ay u helaan files warbaahinta ee Mac.
Talaabada 3: Edit files FCP oo waxaad ka samaysaa DVD menu ah (Ikhtiyaar)
Wondershare DVD Creator for Mac Yimaado oo dhan video iyo tafatirka sawir qalab caadi ah inuu kaa caawiyo inaad kor files warbaahinta. Qalabka tafatirka waxaa ka mid ah Dalagyada, isku beddesha, goo, watermark, Raadka, iwm Si aad u isticmaasho qalabka, fadlan muujiyo aad video clip oo guji "Edit" badhanka ugu waxyooda suuqa kala tafatir ah.
Haddii aad rabto in aad personlize DVD video la menu ah fanaaniinta cusub, waa mid aad u fudud oo isticmaalaya FCP si DVD abuure. Halkan, in ka badan 90 arrimo DVD menu horena waxaa la siiyaa. Qoraaga DVD menu ah, ku beddelato oo keliya in ay "Menu" tab, iyo dooran template menu ka mid ah liiska a. Isla markiiba waxaad u ku eegaan kartaa adigoo gujinaya icon Xiisaha Leh. Haddii loo baahdo, ka beddeli image asalka, music soo jeeda, booska item, iwm Haddii aadan u baahan menu ah, si fudud u doorato "Menu No" ka mid ah liiska.
Talaabada 4: Gubashada FCP video inay DVD ee Mac
Hadda geliso DVD disc maran in aad DVD gubi oo guji "Guba". Daaqadda gubatay, magaca DVD disc, dooro heerka TV aad, oo guji Save si ay u bilaabaan FCP gubanaya si DVD disc. Xawaaraha gubashadii inta badan ku xiran tahay video oo dherer ah iyo qaabeynta computer. Laakiin ha walwalin, barnaamijkan ayaa waxaa ka farxiyay la processor iyo GPU, sidaas shaqeeyaa si ka dhaqso badan waxyaabaha ay la mid ah. Marka FCP writting in DVD disc dhamaystiran, waxaa tuurid si toos ah.
Taasi waa! Hadda cozily aad ka daawan kartaa DVD ah ka abuuray files FCP on TV shaashad ballaaran. Fadlan ku raaxaysan!
Sida loo qaato on a aalada video 4k ee Pro Goo Final